လူပျိုကြီး မဖြစ်အောင် ဒါတွေဆောင် | သိလိုရာမေး
သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေး လူပျိုကြီး မဖြစ်အောင် ဒါတွေဆောင်
ကိုယ်နဲ့ ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေ အတွဲကိုယ်စီနဲ့ ချစ်ကြည်နူး တစ်တီတူးနေကြတဲ့အချိန်မှာ တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်နေလို့ တခါတလေ သိမ်ငယ်မိတဲ့ ချိဖတွေများ ရှိကြလား
အချစ်ကံခေပြီး နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာ ကျွန်းခံနေတယ်လို့ ကြွေးကြော်နေမိပါသလား? တချို့သူတွေကျတော့ Single by Choice ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘဝမှာ အပူမရှာချင်လို့ ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ တစ်ကိုယ်တည်းဘဝကို ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေရှိကြသလို လိုချင်လွန်းလို့ ငမ်းငမ်းတက်နေပေမယ့် ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာမပေးတဲ့ လူတွေလဲ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။
ဒီတော့ ရချင်ရက် စက်စက်ယို ဂေါ်မစွံ့သမား FA ချိဖတို့အတွက် အရွယ်တစ်ခုရောက်လာလို့ လူပျိုကြီးဘဝနဲ့ နိဂုံးမချုပ်ရလေအောင် သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၄) ချက်ကို ပြောပြပေးလိုက်ပါ့မယ်။
ကိုယ်သဘောကျတဲ့ စော်လေးရှိနေပေမယ့် “သူလိုလူမျိုးက ဘဲရှိရင် ရှိနေမှာ” ဆိုတာမျိုး “သူ ငါ့လိုကောင်မျိုးကို ပြန်မကြိုက်လောက်ပါဘူး” ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ၊ “သူကိုငါ ရည်းစားစကားသွားပြောလို့ ငြင်းလိုက်ရင် ငါတော့ အရှက်ကွဲပြီ” ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေးနေမိရင်တော့ ချိဖအနေနဲ့ ဒရာမာချိုးနေတဲ့ မင်းသားကြီး ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီတော့ ငှက်ပျောတုန်းမဖက်ချင်ရင် အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက မကြိုးစားကြည့်သေးဘဲနဲ့ ဒရာမာချိုးနေတာကို ရပ်ပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ့်အထင်နဲ့ လက်တွေ့က ထပ်တူကျနေတယ်ဆိုရင်တောင် မင်းအနေနဲ့ အနည်းဆုံးတော့ ကြိုးစားလိုက်သေးတာပဲမလား?
(၂) ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းပြန်မေးပါ…
အရင်ဆုံး မင်း ဘယ်လိုလူမျိုးကို ဒိတ်ချင်လဲ? ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါ… ချိဖအနေနဲ့ ကိုယ့်ကို Supporting လုပ်မယ့် မိန်းကလေးမျိုးကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုတိုင်ကလဲ တစ်ဖက်လူအတွက် Supporting ကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ့် လူမျိုးဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြောချင်တဲ့ Point ကတော့ သူ့အိုးနဲ့ သူ့ဆန် တန်ရာ တန်ရာပဲ ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောအတိုင်း ကိုယ်က အမြင့်ကို မှန်းရင်တော့ ကိုယ့်ကိုတိုင်က အမြင့်မှာ မရှိရင်တောင်မှ အမြင့်ကိုတက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူဖြစ်ရပါမယ်။
(၃) ကိုယ့်အသွင်အပြင်ကို ဂရုစိုက်ပါ…
သူ့ကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားတယ်တို့… သူ့ရဲ့ ပါးချိုင့်လေး အပြုံးလေးကြောင့် ကြွေသွားတယ်တို့ စသဖြင့် ချိဖတွေ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိရင် ပြောတတ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့လို သဘောအတိုင်းပဲ ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့စော် ကိုယ့်ကို ပြန်ကြိုက်ဖို့ဆိုရင် ချိဖတို့ရဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင်ကလဲ တစိတ်တပိုင်းအရေးပါပါတယ်။ မင်းသားရှုံးလောက်အောင် ချောဖို့မလိုပေမယ့် ယောကျာ်းလေး ပီပီသသနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကိုလဲ ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ… သူနဲ့တွေ့မယ့်နေ့ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပီအပြင် သ သွားဖို့တော့ လိုမယ်ဗျာ…
တခါတလေမှာ တစ်ကိုယ်တည်းသမားဖြစ်နေရတာက ရတာမလို၊ လိုတာမရ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကြောင့် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ်ကို ပြန်မချစ်တာတို့၊ ကိုယ့်ကို ပြန်တော့ချစ်ပါရဲ့… ဒါမဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ ခဏခဏ ပြတ်… အသည်းကွဲနေရတာကြောင့်လဲ FA ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အတိတ်က အချစ်ရေးမှာ ဘယ်လိုပဲ အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံခဲ့ရပါစေ… ချစ်ဖို့ကို မကြောက်ပါနဲ့… စိတ်ရှည်ပါ… ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီအဆင်ပြေတဲ့သူ တစ်နေ့ကျရင် တွေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ပျက်အားငယ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။
ကဲ သိလိုရာမေးကနေ လူပျိုကြီးမဖြစ်စေဖို့ ကျင့်ကြံရမယ့် အဓိကအချက် (၄) ချက်ကိုတော့ ပြောပြပြီးသွားပြီ! ဒါပေမယ့်လဲ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကိုယ်နဲ့ထပ်တူကျတဲ့ လက်တွဲဖော်ကို ရှာတွေ့ဖို့ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားမှုနဲ့အတူ အချိန်နဲ့ ကံကြမ္မာရဲ့ မျက်နှာသာပေးမှုဆိုတာလဲ လိုသေးတော့ အသည်းအသန် ခဲမှန်ဖြစ်နေလို့လဲ ဘာမှမထူးပါဘူး! ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အချိန်ပေးပြီး သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဲတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်း လက်တွဲဖော်ကို ရှာနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
သိလိုရာမေး Thiloyarmay.orgmm Instagram ကို follow လုပ်ရန် >>> ဒီမှာနှိပ်
Viper >>>ဒီမှာ နှိပ်